Ifoni: + 86-15066360289
Siyakwamukela wena yethu esitolo!
Goodyear ukwakhiwa Welt ukuphepha izicathulo
amabhuzu imvula PVC
Iyini indima ematheni kabili izicathulo zabasebenzi?
Esikhathini inhlanganisela wamanje izicathulo yedwa impahla, ematheni double isibe ikhambi elilula kakhulu futhi best. Kuvikelwa ematheni ibangelwa ukudleka ukumelana anti-ukushelela nokusebenza outsole, okuyinto ezalethwa ukukhanya futhi ezithambile izici midsole. Comfort uma uhamba.
Kule umbono, inhlanganisela umhlabeleli lwamanje RU / PU, usebenzisa iraba (RU) ukwenza outsole, polyurethane (PU) njengoba midsole, bese ngokusebenzisa ingcina noma amakhemikhali kunenze nisondelane umsebenzi futhi umsebenzi kunenze nisondelane ka PU ngokwayo izibopho the outsole kuya midsole. Yiqiniso, ematheni elingaphandle izicathulo kungabuye iphucuziwe, elikhazimulayo eqoshiwe.
Kukhona inhlanganisela impahla yedwa, okungukuthi PU / TPU (polyurethane / Thermoplastic polyurethane). Kuyinto ukhululekile ukugqoka. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa Thermoplastic polyurethane ukwenza outsole nezidingo abaklami wesimanje, ngoba ematheni eyenziwe TPU khiqiza yedwa egqamile, kanti futhi le nqubo Umfanekiso oqoshwe etsheni ematheni kungabuye nhlobonhlobo.
Enye yedwa kabili ungqimba eyenziwe PU / PU (polyurethane / polyurethane) inhlanganisela yezinto ezibonakalayo, outsole kanye midsole zenziwa polyurethane. Ukuze outsole, a ikakhulukazi obukhulu polyurethane impahla kumele isetshenziselwa ukunakekela izici bafake ukungawi outsole. Ukuze midsole, polyurethane foamed kufanele kukhethwe ukuze sithole induduzo.
isikhathi Iposi: Dec-24-2018
Hambayo Ucingo: 86-536-2598582
NO.7555 ka Xingyuan emgwaqweni, Zhanglu, Gaomi edolobheni,
Weifang idolobha, isifundazwe Shandong, China
Mon - Fri: 08AM ukuba 05 PM
Sat - Sun: 09AM ukuba 04 PM